Virtual Keyboard - jQuery Keypad Plugin
1518 days ago	(http://feedproxy.google.com)
jQuery plugin that attachesapopup keyboard toatext field for mouse-driven entry or adds an inline keypad inadivision or span.	read more »2Comments Add this link to... Bury
1518 days ago	(http://nineninesanay.blogspot.com)
ကျွန်တော်၊ ဇနီးနဲ့ နှစ်နှစ်သမီးလေး Oregon State မှာရှိတဲ့ Red River Valley တစ်နေရာမှာ ချောင်ပိတ်မိနေခဲ့တယ်။ လူသူအရောက်နည်းတဲ့ နှင်းတလင်းပြင်မှာ ကျွန်တော်တို့ကား ပျက်သွားလို့ဖြစ်တယ်။နှစ်နှစ်ကြာ လေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ ဆရာဝန်သင်တန်းပြီးတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ပျော်ပွဲကျင်းပဖို့ ကျွန်တော်တို့ read more » Discuss Add this link to... Bury
နှင်းဆီနီ ပွင့်ဖတ်ပေါ် က ပျားရည် တစက် နှင့် အရိမဒ္ဒန (၃)
ခြောက်ရက်မြောက်နေ့နံနက်ယ နေ့ နံနက် တွင် ဟို တယ် ဝန် ထမ်း တံခါး လာ ခေါက် သည် နှင့် ကျမ အ ပြေး အ လွှား တံခါး ထ ဖွင့်လိုက် သည် ကျမ တစုံ တရာ ကို မျှော် လင့်နေ မိ သလား----ဟိုတယ် ဝန်ထမ်း ယူလာ သည့် နံနက် စာများ နှင့်အတူ နှင်းဆီ နီ တပွင့် ကို မြင်လိုက် ရ သည် နှင့် ကျမ ရင်ထဲ လှိုက် ကနဲ ဘာကြောင့် ဖြစ် read more » Discuss Add this link to... Bury
Myanmar Pretty Model, Melody hopes the best for her live show music album
1519 days ago	(http://www.myanmarcelebrity.com)
Myanmar Model and Singer, Melody releas	read more » Discuss Add this link to... Bury
Add to: Myanmar Model and Singer, Melody releas">
1519 days ago	(http://warwarkhaingmin.blogspot.com)
ဒီသီချင်းလေးကို အားလုံးကြိုက်ကြမယ်ထင်လို့ မျှဝေလိုက်တာပါနော်...အသံကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ မကောင်းပါဘူး။ :Dအသံမကောင်းတာ ကျမမောင်နှမတွေကသိပြီးသားပဲဆိုတော့ ပိုပြီးမထူးတော့ပါဘူးနော်..လွမ်းနိုင်ကြပါစေ....var VideoID = "1237769140509_recording"; var Width = 425; var	read more » 1 Comment Add this link to... Bury
1519 days ago	(http://ywartharlay-ytu.blogspot.com)
သင်သည် စက်ရုပ်မြို့တော်တွင်နေထိုင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါက ဤနေရာမှ ဆက်မဖတ်ရန် အလေးအနက် တောင်းပန်ပါသည်..ထို့ထက်ပို၍ သင်သည် စက်ရုပ်လူသားတစ်ဦးဆိုပါက ဤနေရာမှ လှည့်ပြန်ရန် အနူးအညွှတ်တောင်းပန်အပ်ပါသည်…..ဆက်လက်၍ဖတ်ရှုပါက မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်ခင်ဗျာ……ဟိုဟိုဒီဒီ ကြည့်မိတယ်။ အလို….	read more » Discuss Add this link to... Bury
1519 days ago	(http://www.mabaydar.co.cc)
ကြိုက်မရှက် ငိုက်မရှက်တဲ့... အားလုံးကြားဖူးကြမှာပါ.. မဗေဒါအတွက်တော့ ငိုက်မိတာ ရှက်စရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လို့ ပြန်တွေးတိုင်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်မျက်နှာပူနေရပါတယ်..စကာင်္ပူက အများသုံး ဘတ်စ်ကားတွေ ရထားတွေပေါ်မှာ ခါးပိုက်နှိုက်သတိပြုစရာ.. မိန်းကလေးမို့ အသားယူခံရမှာကို သိပ်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး.. နောက်ပြီး အြ	read more » Discuss Add this link to... Bury
Multiple File Upload Plugin for jQuery - Uploadify
1519 days ago	(http://feedproxy.google.com)
This jQuery plugin allows you to change any element with an ID on your page intoasingle or multiple file upload tool.	read more » Discuss Add this link to... Bury